kubalulekile Iingxaki ezinkulu
iinyanga 11 5 iintsuku ezidlulileyo #969 by Dariussssss
Ngama-paywares ambalwa nje.Izidiza ezingapheliyo kwi-FSX yam ziphukile. Akukho yerediyo kwaye akukho GPS .....
Ndisandul 'ukuvuselela nje into yonke ... akukho ndlela ndiya kuyenza kwakhona. Ngoko, ingayiphi na indlela yokuyilungisa, kwaye yintoni isihogo eso? Yintoni engalunganga ngayo?
iinyanga 11 5 iintsuku ezidlulileyo #970 by DRCW
Awuyithandi nje, ndimele ndenze okufanayo kwiimeko ezininzi. Into yokuqala kukukhipha isofthiwe enokuyenza. Into elandelayo ukucima i-FSX cfg eyintloko, uze uqalise kwakhona i-FSX, iya kuthatha indawo ye-cfg ngokutsha, njengoko kwakunjalo xa uqala ukukhuphela i-FSX. Yonke isofthiwe yakho ekhutshiwe iya kuhlala ikhona .Kodwa kuya kufuneka uvume iimpawu kwakhona.
iinyanga 11 5 iintsuku ezidlulileyo - iinyanga 11 5 iintsuku ezidlulileyo #984 by DRCW
Ndingayongeza ukuba enye yeeprogram zokuhlawulwa ozifakayo kubangela ukuba iifolda ezabelwana ngazo ngaphakathi kwe-FSX ukuba zonakalise. Ukusuka kwenkcazo yakho, kungenzeka ukuba ifowuni ifayili. I-payware inendlela ethile, yonakalisa isithwathwa se-radio kunye neefolda ze-GPS. Ndiyathemba ukuba awuyi kuphinda uqale kwakhona, kodwa ukuba ngaba ndifaka nje intambo kulabo abakwenzayo kwicandelo le-FSX. Ndiyathemba ukuba kunceda
Uhlobo lokugqibela: Iinyanga ze-11 iintsuku ze-5 ezedlule DRCW.
iinyanga 11 5 iintsuku ezidlulileyo #990 by Dariussssss
Izinto ezimnandi kukuba, zisebenza. Xa ndilayisha i-aircraft engapheliyo, bobabili bahamba.
Emva kokuba ndimise i-flight, fumana imvume ye-ATC njl .... kubuya, bobabini babo. Eyona nto idlwengulileyo. Ndicinga ukuba i-PMDG 747 iyayibangela. Isusiwe ngoku kwaye ndicinga ukuba kuya kulungile.
Ndiyabulela ngoncedo nangona kunjalo.
Ixesha ukwenza page: 0.214 imizuzwana